Mako 6 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mashoko Akanaka Akanyorwa naMako 6:1-56
Jesu anorambwa kumusha kwake (1-6)
Vane Gumi Nevaviri vanorayiridzwa nezveushumiri (7-13)
Kufa kwaJohani Mubhabhatidzi (14-29)
Jesu anopa vanhu 5 000 zvekudya (30-44)
Jesu anofamba pamusoro pemvura (45-52)
Kuporesa vanhu muGenesareti (53-56)
6 Akabva ikoko, akasvika kumusha kwake,+ uye vadzidzi vake vakanga vainaye. 2 Sabata parakasvika, akatanga kudzidzisa musinagogi, uye vazhinji vakamunzwa vakashamiswa, vakati: “Munhu uyu akawana kupi zvinhu izvi?+ Nei akapiwa uchenjeri uhwu, uye achikwanisa kuita mabasa akadai esimba nemaoko ake?+ 3 Uyu haasi iye muvezi,+ mwanakomana waMariya+ uye mukoma waJakobho+ naJosefa naJudhasi naSimoni+ here? Uye hanzvadzi dzake hadzisi idzo dzatiinadzo pano here?” Saka havana kumutenda.* 4 Asi Jesu akati kwavari: “Muprofita anokudzwa kumwe kwese asi kwete kumusha kwake nepakati pehama dzake uye mumba make.”+ 5 Saka haana kukwanisa kuita mabasa esimba ikoko kunze kwekuisa maoko ake pavanhu vashomanana vairwara achivarapa. 6 Akashamiswa chaizvo nekusatenda kwavo. Uye akatenderera misha yese, achidzidzisa.+ 7 Akabva ashevedza vane Gumi Nevaviri, akatanga kuvatuma vari vaviri vaviri,+ uye akavapa simba pamusoro pemweya isina kuchena.+ 8 Akavarayirawo kuti varege kutakura chinhu parwendo rwacho kunze kwemudonzvo chete, vasina chingwa, homwe yezvekudya, kana mari* mumabhandi avo,+ 9 asi kuti vapfeke shangu uye varege kupfeka nguo mbiri.* 10 Akatizve kwavari: “Kwese kwamunopinda mumba, garai imomo kusvikira mabva munzvimbo iyoyo.+ 11 Uye kwese kwamusingagamuchirwi kana kuteererwa, pamunobva munzvimbo iyoyo, zunzai guruva riri patsoka dzenyu kuti zvive uchapupu kwavari.”+ 12 Vakabva vaenda vakatanga kuparidza kuti vanhu vanofanira kupfidza zvivi zvavo,+ 13 uye vakadzinga madhimoni mazhinji,+ vakazora mafuta vanhu vakawanda vairwara vachivarapa. 14 Mambo Herodhi akabva anzwa izvi, nekuti zita raJesu rakanga rava kuzivikanwa kwese kwese, uye vanhu vaiti: “Johani Mubhabhatidzi amutswa kuvakafa, ndokusaka ari kuita mabasa esimba.”+ 15 Asi vamwe vaiti: “NdiEriya.” Vamwewo vaiti: “Muprofita akangofananawo nevamwe vaprofita vakamborarama.”+ 16 Asi Herodhi paakazvinzwa, akati: “Johani wandakadimbura musoro ndiye amutswa.” 17 Nekuti Herodhi akanga atuma vanhu kunosunga Johani, akamuisa mujeri nemhosva yaHerodhiyasi, mudzimai wemukoma wake Firipi, waakanga aroora.+ 18 Nekuti Johani aiudza Herodhi kuti: “Hazvibvumirwi nemutemo kuti mutore mudzimai wemukoma wenyu.”+ 19 Saka Herodhiyasi aiva nechigumbu naye uye aida kumuuraya, asi aitadza kuzviita. 20 Nekuti Herodhi aitya Johani, achiziva kuti aiva munhu akarurama uye mutsvene,+ uye aimuchengetedza. Pashure pekunzwa zvaaitaura, akashaya kuti oitei, asi akaramba achimuteerera achifara. 21 Asi mukana wakazomuka pakagadzirwa naHerodhi kudya kwemanheru pazuva rekuberekwa kwake,+ akakoka makurukota ake nevatungamiriri vemauto nevarume vakakurumbira vekuGarireya.+ 22 Uye mwanasikana waHerodhiyasi akauya, akatamba, akafadza Herodhi nevaya vaaidya navo. Mambo akati kumusikana wacho: “Ndikumbire chero chaunoda, ndikupe.” 23 Akatomupikira achiti: “Chese chauchakumbira ndichakupa, kusvikira pahafu yeumambo hwangu.” 24 Saka akaenda kuna amai vake akati: “Ndokumbirei?” Ivo vakati: “Musoro waJohani Mubhabhatidzi.” 25 Akabva angopinda muna mambo pakarepo, akataura chikumbiro chake achiti: “Ndinoda kuti mundipe iye zvino musoro waJohani Mubhabhatidzi uri mundiro.”+ 26 Kunyange zvazvo izvi zvakamushungurudza kwazvo, mambo akanga asingadi kumunyima zvaakakumbira, nekuti akanga aita zvekupika uye paiva nevaenzi. 27 Saka mambo akabva atotuma murindi, akamurayira kuti auye nemusoro waJohani. Saka akaenda, akamudimbura musoro ari mujeri, 28 akauya nemusoro wake uri mundiro. Akaupa musikana wacho, uye musikana wacho akaupa amai vake. 29 Vadzidzi vake pavakazvinzwa, vakauya vakatora chitunha chake, vakachiviga muguva.* 30 Vaapostora vakaungana paiva naJesu, vakamuudza zvinhu zvese zvavakanga vaita uye vadzidzisa.+ 31 Iye akati kwavari: “Imi uyai kwenyu mega kusina vanhu, mumboti zororei.”+ Nekuti kwaiuya vanhu vakawanda vamwe vachienda, uye vakanga vasina kana nguva yekuzorora kuti vadye. 32 Saka vakasimuka nechikepe kuti vaende kwavo vega kunzvimbo isina vanhu.+ 33 Asi vanhu vakavaona vachienda zvikazivikanwa nevakawanda, uye vakamhanya netsoka ikoko vachibva mumaguta ese vakavatangira kusvika. 34 Paakaburuka, akaona vanhu vakawanda, uye akasiririswa navo,+ nekuti vakanga vakaita semakwai asina mufudzi.+ Uye akatanga kuvadzidzisa zvinhu zvakawanda.+ 35 Pari zvino nguva dzakanga dzafamba, uye vadzidzi vake vakauya kwaari, vakati: “Nzvimbo ino iri kure nekunogara vanhu uye nguva yapera.+ 36 Varegei vaende mumaruwa nemumisha yakapoteredza vanozvitengera zvekudya.”+ 37 Akavapindura achiti: “Vapei zvekudya imimi.” Ivo vakati kwaari: “Toenda kunotenga chingwa chemadhinari* 200 tochipa vanhu kuti vadye here?”+ 38 Akati kwavari: “Mune chingwa chakawanda sei? Endai munoona!” Pavakatarisa, vakati: “Zvingwa zvishanu nehove mbiri.”+ 39 Akabva arayira vanhu vese kuti vagare muzvikwata pauswa hwakasvibirira.+ 40 Saka vakagara muzvikwata zvevanhu 100 uye 50. 41 Akatora zvingwa zvacho zvishanu nehove dzacho mbiri, akatarisa kudenga, ndokukumbira chikomborero.+ Akabva adimbura-dimbura chingwa chacho, akatanga kuchipa vadzidzi kuti vachiise pamberi pevanhu, uye akadimbura-dimbura hove dzacho mbiri dzikapiwa vanhu vese. 42 Saka vese vakadya, vakaguta, 43 uye vakaunganidza zvakanga zvasara zvikaita tswanda 12, tisingaverengi hove.+ 44 Vaya vakadya chingwa vaiva varume 5 000. 45 Pakarepo, akabva aita kuti vadzidzi vake vakwire chikepe vafanotungamira mhiri pedyo neBhetisaidha, iye ndokusara achiita kuti vanhu vaende.+ 46 Asi pashure pekuonekana navo, akaenda mugomo kunonyengetera.+ 47 Paakanga ava manheru, chikepe chakanga chava pakati pegungwa, asi iye akanga asara ega panzvimbo iyoyo.+ 48 Saka paakavaona vachiomerwa nekufambisa chikepe nekuti mhepo yaibva nechekwavakanga vakananga, panenge panguva yekurinda kwechina kweusiku,* akauya kwavari achifamba pamusoro pegungwa; asi akanga achiita seari kuda* kuvapfuura. 49 Pavakamuona achifamba pamusoro pegungwa, vakati: “Haasi munhu chaiye uyu!” Uye vakaridza mhere. 50 Nekuti vese vakamuona uye vakanetseka. Asi akabva angotaura navo, achiti: “Musavhunduka henyu! Ndini; musatya.”+ 51 Akabva apinda muchikepe mavaiva, mhepo ikadzikama. Izvi zvakavashamisa kwazvo, 52 nekuti vakanga vasina kunzwisisa chishamiso chaakanga aita chechingwa, asi mwoyo yavo yakaramba yakagomara pakunzwisisa. 53 Pavakayambuka kumhiri, vakapinda muGenesareti, vakasungirira chikepe pedyo naipapo.+ 54 Asi pavakangoburuka muchikepe, vanhu vakamuziva. 55 Vakamhanya-mhanya munharaunda iyoyo yese, vakatanga kuunza vaya vairwara vari patumibhedha vachienda navo kwavakanga vanzwa kuti akanga ari. 56 Kwese kwaaipinda mumisha kana mumaguta kana mumaruwa, vaiisa varwere pamisika, uye vaimuteterera kuti vangobata masa* enguo yake yekunze chete.+ Uye vese vaiabata vakaporeswa.
^ Kana kuti “vakagumburwa pamusana pake.”
^ ChiGir., “mhangura.”
^ Kana kuti “varege kuva neimwe nguo yekuchinja.”
^ Kana kuti “muguva revanoyeukwa.”
^ Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
^ Kureva, kubva kuma3:00 dzeusiku kusvika kuma6:00 dzemangwanani.
^ Kana kuti “akanga ava kuda.”
^ Masa itambo kana kuti shinda dzinosiyiwa dzakarembera kumucheto wemachira kana kuti zvipfeko.